China Caps orinasa sy mpanamboatra | SJJ
] Ny satroka dia tsy ampiasaina hialana amin'ny masoandro fotsiny, ary koa lamaody lamaody. Tsara ho an'ny fampiroboroboana ary amin'ny maha-sarimihetsika, vokatra peripheral anime. Afaka manolotra satroka avo lenta ho an'ny tranga sy hetsika lehibe sasany izahay. Misy kalitao mahazatra miaraka amin'ny vidiny mirary koa, satria misy tetikasa manana ny vidiny kendrena amin'izay dia afaka manome sosokevitra tsara indrindra izahay.
satrokaTsy ampiasaina hialana amin'ny masoandro fotsiny, fa koa lamaody lamaody, tsara ho an'ny fampiroboroboana ary toy ny sarimihetsika, vokatra peripheral anime. Nanome mpanjifa marobe izahay, ny ankamaroan'izy ireo dia manafatra satroka ho an'ny sarimihetsika malaza sy logo an'ny orinasa pirinty avy eo dia nanome ireto satroka ireto ho an'ny mpiasa, mifanaraka amin'ny akanjo fiasan'izy ireo. Ary ny satroka dia malaza amin'ny fifaninanana fanatanjahan-tena sasany, fampielezan-kevitra amin'ny doka, fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana. Ankizy toy ny satroka, vehivavy toy ny satroka, ny lehilahy toy ny satrony, ny antitra toy ny satrony. Ny cap dia mety amin'ny karazana olombelona rehetra manerantany. Azontsika atao ny manao ny satroka amin'ny endrika samihafa miaraka amin'ny haben'ny ampahany, toy ny haavony eo anoloana, ny haben'ny molony, ny lavaka mitohana, ny kofehy fatorana, ny fatorana anaty, ny fanjairana, ny bokotra ambony sns. Ireo logo dia azo amboarina amin'ny fomba samihafa, endrika na habe samihafa. Navy manga, fotsy, mainty, mainty, burgundy, mavo mazàna ho an'ny satroka. Ny lamba na fitaovana hafa amin'ny satroka dia mety ho hafa arakaraka ny fangatahan'ny mpanjifa, hihaona amin'ny loko pantone. Ny satrokay dia tontolo iainana hihaonana amin'ny fenitry ny fitsapana an'ny EU na USA.
Afaka manolotra satroka avo lenta ho an'ny tranga sy hetsika lehibe sasany izahay. Misy kalitao mahazatra miaraka amin'ny vidiny mirary ihany koa, satria misy tetikasa manana vidiny kendrena azontsika omena soso-kevitra tsara indrindra. IZAHAY hanome ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny tetikasanao amin'ny alàlan'ny fifandraisana matihanina sy ny vidin'ny fifaninanana.
Safidio izahay ho mpiara-miasa aminao, makà hevitra tsara indrindra.
Fitaovana: Canvas, landihazo, polyester, polyester-landihazo, denim, fibre acrylic, nylon, lamba harato, PU, ​​hoditra.
Style: takelaka 5 na 6, araky ny famaritan'ny mpanjifa azy
Size: Ny haben'ny olon-dehibe dia manodidina ny 58 ~ 62 mm, ny haben'ny ankizy dia 52 ~ 56 mm
Drafitra Logo: Pirinty vita amin'ny silkscreen, famindrana hafanana, fanamasinana, fanjairana fanjairana PVC / amboradara / PU, rhinestones, entana vita amin'ny entana mafy sns.
Firaiketana fanitsiana habe any ambadika: Velcro, buckle plastika, vy buckle, tarika elastika sns
Tsy voafetra ny MOQ
Teo aloha: Entana hampiroboroboana hazo
Manaraka: Poker Chips